Room ည့်ခန်းသုံးပရိဘောဂစက်ရုံ | တရုတ် Living ည့်ခန်းပရိဘောဂထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
Support ကိုခေါ်ပါ 0086-15732669866
ပလတ်စတစ်နောက်ကျောနှင့်ထိုင်ခုံ၊ ပုပ်သစ်သားခြေထောက်များ၊ အနက်ရောင်ခြယ်ထားသောဘောင်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - 46x52x81.5cm အရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင် - မီးခိုးရောင်အဝါရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော - ၀ ယ်သူ၏လိုအပ်ချက်အရအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ: ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ Quananteed၊ QC full in section အထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်သုံးပရိဘောဂအင်္ဂါရပ် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - မျက်မှောက်ခေတ်မူလနေရာ - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 4PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ဝန်ဆောင်မှု: Y 40HQ: 2384PCS Min.Order အရေအတွက် - 200 ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်: 100 ...
PP ပလတ်စတစ်ကျောနှင့် PU အခွံ၊ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားခြေထောက်များကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား - 48x57x83.5cm အရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင် - မီးခိုးရောင်အဝါရောင်အပြာရောင် - လိမ္မော်ရောင်အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အပူချိန်ခံနိုင်ရည် - -30 ℃မှ + 70 ℃လုပ်ငန်းသက်တမ်း - ၂ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အထိစိတ်ကြိုက်: ၀ ယ်သူအနေဖြင့် လိုအပ်ချက်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်စသည်တို့။ နမူနာ - ရရှိနိုင်အရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ အရည်အသွေးပြည့်မီမှု၊ အပိုင်းကဏ္inတွင်အပြည့်အ ၀ အသုံးပြုခြင်းအထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်သုံးပရိဘောဂအသွင်အပြင် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - မျက်မှောက်ခေတ်မူလနေရာ - He Bei, China ထုပ်ပိုးမှု - 4PCS / CTN သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ။ ရောင်းချပြီးနောက် ...
18MM MDF စားပွဲထိပ်တွင်ဆေးသုတ်ထားသောစက္ကူ၊ အနက်ရောင်ခြယ်ထားသောဘောင်၊ ချိန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်ပါရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ၁၅၈ * ၈၅ * ၇၅ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားခြင်း - ၀ ယ်သူသည်လိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာနှင့်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ။ ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ , အပိုင်းကဏ္inတွင်အပြည့်ထည့်သွင်းထားသည်။ အထွေထွေအသုံးပြုခြင်း - အိမ်ပရိဘောဂအင်္ဂါရပ် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - မျက်မှောက်ခေတ်မူလနေရာ - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 1PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ဝန်ဆောင်မှု: Y 40HQ: 560PCS Min.Order အရေအတွက် - ၁၀၀ ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - ၁၀၀ ...
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - 80x80x75cm အရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင် (သို့) စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသူ - ဝယ်သူလိုအပ်ချက်အရအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ - ရရှိနိုင်သည့်အရေအတွက် - အရည်အသွေး၊ အရည်အသွေး၊ ကွမ်တန်၊ အပိုင်းအပြည့်အဝတွင်အကျုံး ၀ င်သည်။ အထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်တွင်းပရိဘောဂအသွင်အပြင် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - ခေတ်သစ်နေရာ : He Bei, China Packing: 1PCS / CTN သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ၀ န်ဆောင်မှု - Y 40HQ - ၆၁၀PCS Min.Order အရေအတွက် - ၁၀၀ ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - တစ်လလျှင် ၁၀၀၀၀ အပိုင်းအစ / အပိုင်းအစများအဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ခြင်းအဆင့်များ - စားပွဲထိပ် - ကြမ်းတမ်းသောပုံဖြတ်ခြင်း→ဌ ...
လူသစ် Round ခြေထောက်
15mm MDF စားပွဲခုံပေါ်တွင်အဖြူရောင် PU ဆေးမှုတ်ဆေး၊ သစ်သားခြေထောက်၊ ပန်းချီနှင့်သံဘောင်တို့ပါရှိသည်။ ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ၁၁၀ * ၇၀ * ၇၅ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသူ - ဝယ်သူလိုအပ်ချက်အရအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ။ ရရှိနိုင်သည့်အရေအတွက် - အရည်အသွေး၊ အရည်အသွေး၊ ကွမ်တန်၊ အပိုင်းအပြည့်အဝတွင်အကျုံး ၀ င်သည်။ အထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်ပရိဘောဂအသွင်အပြင် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - ခေတ်သစ်မူရင်းနေရာ - He Bei, China Packing: 1PCS / CTN သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ၀ န်ဆောင်မှု - Y 40HQ - ၆၁၀PCS Min.Order အရေအတွက် - ၁၀၀ ပေးသွင်းသူ ...
စားသုံးသူထိပ်တန်း ၁၅ မီလီမီတာ MDF မှ PU မှုတ်ဆေး၊ အနက်ရောင်ဆေးခြယ်ထားသောဘောင်၊ သစ်သားခြေထောက်များ။ ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား - ၁၂၀ * ၈၀ * ၇၂ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင် (သို့) စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက် - ၀ ယ်သူသည်လိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာနှင့်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ - ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ , QC တွင်အပြည့်ပါအထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်သုံးပရိဘောဂအင်္ဂါရပ် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - ခေတ်သစ်မူရင်းနေရာ - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 1PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ဝန်ဆောင်မှု: Y 40HQ: 550PCS Min.Order အရေအတွက်: 100 Supply Ability: 10000 Piece / ...
PU မှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်ထားသောထိပ်တန်း ၁၅ မီလီမီတာ MDF ရှိကလေးငယ်များအတွက်စားပွဲ ITEM NO .: SP1004 ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ၉၀ * ၅၅ * ၅၆ စင်တီမီတာအရွယ်အစား - ၁၀၀ * ၆၃ * ၁၀.၅ စင်တီမီတာအိတ်ဆောင်： 1PCS / CTN CARTON အလေးချိန် - 11.45kg 40HQ: 970PCS FOB TIANJIN: USD22 .5 / PC ကလေးများအတွက်ထိုင်ခုံ PP ခုံနောက်ခံ၊ ပက်ဖျန်းထားသောသတ္တုဘောင် PEMEM NO .: SP2009 ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ၃၄ * ၃၈ * ၅၇ စင်တီမီတာကတ်တန်အရွယ်အစား - ၄၁ * ၃၅ * ၃၈ စင်တီမီတာအိတ်ဆောင် - ၂PCS / CTN CARTON အလေးချိန် - ၅.၁ ကီလိုဂရမ် 40HQ - ၂၅၆၂PCS FOB Tianjin: USD6.90 / PC ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: L ...
TABLE စားသုံးသူစားသုံးသူထိပ်ဆုံး ၁၅ မီလီမီတာ MDF PU မှုတ်ဆေးသုတ်ထားသောဆေးပစ္စည်းအမှတ် - SP1004 ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ၆၀ * ၆၀ * ၅၆ စင်တီမီတာအရွယ်အစား - ၆၅ * ၆၄ * ၇ စင်တီမီတာအိတ်ဆောင်： 1PCS / CTN CARTON အလေးချိန် - ၇ ကီလိုဂရမ် ၄၀ ကီလိုဂရမ် - ၂၃၅၀PCS FOB Tianjin: USD15.8 / PC ကုလားထိုင် PP နောက်ကျောနှင့်ထိုင်ခုံ၊ ပက်ဖျန်းထားသောသတ္တုဘောင် TEM NO .: SP2009 ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား - ၃၁ * ၃၈ * ၅၇ စင်တီမီတာကတ်တန်အရွယ်အစား - ၄၁ * ၃၅ * ၃၈ စင်တီမီတာထုပ်ပိုးခြင်း - ၂PC / CTN CARTON အလေးချိန် - ၅.၁ ကီလိုဂရမ် ၄၀HQ - ၂၅၆၂PCS FOB Tianjin: USD6.90 / PC ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ: L / CT / T Min.Order အရေအတွက်: 200 Supply Ability: 10000 Piece / Pieces per Quantity အရေအတွက်: အရည်အသွေးမြင့်မား, Quananteed, ...
PU မှုန်ရေမွှား၊ အနက်ရောင်ခြယ်ထားသောဘောင်, beech သစ်သားခြေထောက်များနှင့်အတူ 15mm MDF ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: DIA80 * 75CM အရောင်: အဖြူရောင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက်: ဝယ်သူလိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်စသည်တို့ကို။ နမူနာ: ရရှိနိုင်အရေအတွက်: အရည်အသွေးမြင့်မား, Quananteed, QC အပြည့်အဝ အပိုင်းအထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်တွင်းပရိဘောဂအသွင်အပြင် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - ခေတ်သစ်ဇာစ်မြစ် - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 1PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ဝန်ဆောင်မှု: Y 40HQ: 1010PCS Min.Order အရေအတွက်: 100 Supply Ability: 10000 Piece / Pieces per ...
နောက်ကျောနှင့်ထိုင်ခုံများ၊ ဆေးသုတ်ထားသောသတ္တုကိုယ်ထည်၊ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသစ်သားခြေထောက်များကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား - ၆၁.၅ * ၅၃.၅ * ၇၅ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသူ - ၀ ယ်သူသည်လိုအပ်သောအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ - ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ အပိုင်းကဏ္ General အထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်တွင်းပရိဘောဂအင်္ဂါရပ် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - ခေတ်သစ်ဇာစ်မြစ် - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 2PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ဝန်ဆောင်မှု: Y 40HQ: 790PCS Min.Order အရေအတွက် - 200 Supply Ability: Mo Mo per 10000 Piece / Pieces ...
နောက်ကျောနှင့်ထိုင်ခုံများ၊ ပုပ်သစ်သားခြေထောက်များ၊ အနက်ရောင်ခြယ်ထားသောဘောင်ထုတ်ကုန်များအရွယ်အစား - ၄၆ * ၅၃ * ၁၀၇ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင် - မီးခိုးရောင်အဝါရောင် (သို့) စိတ်ကြိုက်စိတ်ကြိုက် - ၀ ယ်သူသည်လိုအပ်ချက်အတိုင်းအတာနှင့်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ - ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ , QC တွင်အပြည့်ပါအထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်ပရိဘောဂအင်္ဂါရပ် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - မျက်မှောက်ခေတ်မူလနေရာ - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 2PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ဝန်ဆောင်မှု: Y 40HQ: 1000PCS Min.Order အရေအတွက်: 200 Supply Ability: 10000 Pie ...
နောက်ကျော၊ ထိုင်ခုံ၊ ခြေထောက်၊ မချော်သောခြေထောက်များထုတ်လုပ်မှုအရွယ်အစား - ၄၁ * ၅၂ * ၈၂ စင်တီမီတာအရောင် - အဖြူရောင်အနက်ရောင်အဝါရောင်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသူ - ၀ ယ်သူ၏လိုအပ်ချက်အရအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရောင်အစရှိသဖြင့်နမူနာ - ရရှိနိုင်သောအရေအတွက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ QC တွင်အပြည့်ပါအထွေထွေအသုံးပြုမှု - အိမ်သုံးပရိဘောဂအင်္ဂါရပ် - ဖယ်ရှားနိုင်သောအသွင်အပြင် - မျက်မှောက်ခေတ်မူလနေရာ - He Bei, China ထုပ်ပိုးခြင်း - 4PCS / CTN သည်ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ After-sale ၀ န်ဆောင်မှု: Y 40HQ - ၁၀၅၆PCS Min ။ Order အရေအတွက်: 200 Supply Ability: တစ်လလျှင် Piece / Piece 10000 ...
လိပ္စာ: Renzhuangzi villiageBazhou City, Langfang City, Hebei Province